Isika rehetra dia mankahala ny spam sy ny antsoantso mangatsiaka ... Mandra-pahatongantsika | Martech Zone
Alakamisy, Jona 15, 2017 Zoma, Jona 16, 2017 Douglas Karr
Tamin'ny 15 May, nahazo mailaka tsy nangatahina (aka SPAM) avy amin'ny masoivoho iray tany Atlanta aho nilaza tamiko ny atao hoe horonantsary manazava. Fantatro hoe inona izany, izahay efa voasoratra momba ny horonan-tsary manazava be dia be ary navoaka vitsivitsy taminay. Tsy namaly ny mailaka aho. Herinandro taty aoriana dia mahazo mailaka hafa miaraka amina fanamarihana mitovy amin'izany aho. Herinandro taty aoriana, iray hafa. Tsy mamaly koa aho. Mailaka efatra izay tsy novaliako na na tsindrio rohy iray aza.
Nanomboka niara-niasa tamin'ny mpanjifa vaovao izahay ary nanamafy ny fepetra takian'izy ireo momba ny antoka sasany izay amboarinay endrika indray. Iray amin'ireo tetikasa ho avy izay fantatray fa hovahanay ny horonantsary manazava azy ireo. Noho izany, rehefa mamaly ny hevitro momba ny antoka vaovao noforoninay aho, dia mahazo mailaka hafa avy amin'ny orinasan-dahatsary manazava.
Tsy nisy rohy tsy nisoratra anarana tao amin'ilay mailaka, ary tsy nisy koa Powered by logo… fa azoko antoka fa mampiasa fitaovana mandeha ho azy amin'ny varotra izy. Ny solontenan'ny mpivarotra dia nampiditra rohy sasany amin'ny asany farany tao amin'ny mailaka ary nilaza izy ireo fa te-hanome fihenam-bidy hiara-hiasa amiko amin'ilay tetikasa voalohany. Averiko eo ambonin'ilay ohatra ny rantsan-tanako mampifandraika amina segondra vitsivitsy manontany tena raha mety izany na tsia…
Ny toerana nalehiko dia ny horonantsary manazava 1-minitra mahafinaritra. Nampihetsi-po tanteraka izy io, nanana feon-kira tena tsara, ary na ny effets-ny aza mifangaro. Ny hafainganam-pandehany dia tsy maimaika mihitsy ary kalitao miavaka. Mety fifampiraharahana tsy tokony holalovako ity ka namaly ny mombamomba ny tetikasako vaovao aho ary nanindry ny fandefasana.
Tao anatin'ny iray minitra dia naneno ny findaiko ary ilay rangahy no nandefa hafatra tsy nangatahana ahy isan-kerinandro. Niantso fotsiny izy mba hahalala antsipiriany bebe kokoa ary faly izy hijery raha afaka manampy izy ireo. Tsy nanery izy, tsy nanandrana nanidy ahy, ary nandany fotoana kely hianarana momba ny orinasako sy ny fahaizantsika. Namarana ny resaka nifanaovanay taminy izahay ary nampanantena fa hanaraka teny nalaina maraina.
Halantsika izany… Fa mahomby!
Azoko antoka fa hokapohina amin'ny Internet aho satria mpivarotra mailaka miaiky am-pahibemaso fa:
Raha ny marina manao ny tsy azo eritreretina ary fipihana rohy amin'ny mailaka SPAM.
Ok, azonao aho. Fa fantatrao ve? Ity masoivoho ity dia mety nahita mpanjifa vaovao izay hanome azy ireo asa mitohy amin'ity sehatra ity. Ary mety tonga mpiara-miasa tsy mampino fotsiny aho izay afaka mampiakatra ny sarimiaina ho antsika amin'ny vidiny mirary. Raha tsy manao afa-tsy horonantsary manazava vitsivitsy ho azy ireo aho, ny valisoa dia mihoatra lavitra noho ny risika ho an'ireo orinasa roa ireo.
Isika rehetra dia mivazavaza sy mivazavaza amin'ny resaka SPAM sy antso mangatsiaka… fa tena mila marin-toetra ny fahombiazan'izy ireo isika. Ny marketing dia ny vokatra, ny fametrahana ary ny vidiny. Amin'ity tranga ity, ny vokatra no ilaiko, ny fametrahana azy dia ara-potoana, ary ny vidiny dia marina.
Tsy midika izany fa hamporisika ny mpanjifako aho hanomboka SPAMMING ny tsy fetezan'ny olona… fa fantatro tanteraka ny antony anaovan'ny orinasa azy.
Tags: mailakaantso amin'ny varotramailaka fivarotanaamin'ny spamtorohevitra tamintsika azaantso varotra tsy ampoizinamailaka fivarotana tsy nangataka
16 Jun 2017 amin'ny 11:11 AM
Mitovy hevitra aminao aho. Ny lakileny eto dia zava-dehibe ny fikarohana. Mila mazoto amin'ny fanaovana izany fikarohana izany isika ary mahatakatra ireo mety ho mpividy. Heveriko fa matetika isika dia somary tezitra satria mety nahatsapa ny fanamarihana SPAM isika ary nahazo fikafika kely faly nanisy marika ny hafa ho SPAM. Ity karazana zavatra ity dia mety hanimba ny orinasa; mandritra ny fotoana ela. Nahazo mailaka mangatsiaka aho omaly alina tamina olona manandrana mivarotra ahy amin'ny serivisy atiny, dia nanamarika azy io ho spam aho tamin'ny voalohany, saingy tsy zakako ny nanao izany. Tsy nanana rohy unsub koa izy. Notondroiko fotsiny izany ary hoy aho hoe: "tsia, misaotra." Mieritreritra aho fa mila mamantatra ny maha samy hafa ny spam phishy isika. Ireo milaza hoe, "raiso ity fanampin-tsakafo vaovao ity," na "mahazo $ 1,000 isan'andro, avy any an-trano"; Mazava fa spam ireo, tsy misy lasibatra. Heveriko fa raha ny mpivarotra iray dia nanao fikarohana ampy hahafantarana fa eo amin'ny varotra ianao ary manome anao mailaka manolotra serivisy marketing, tsy maninona izany. Tsotra fotsiny ary lazao hoe, "tsia, misaotra" dia ho tanteraka izany. Tsy mandeha ny mailaka, na miantso mangatsiaka.